Ukulethwa kweloli lokuqala elinikwa amandla eCummins ePenske Truck Leasing kukhunjulwa ngamaloli kaHino
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Chofoza lapha uma lokhu kungukukhishwa kwakho kwabezindaba! » Ukulethwa kweloli lokuqala elinikwa amandla eCummins ePenske Truck Leasing kukhunjulwa ngamaloli kaHino
Ngasekuqaleni konyaka, uHino umemezele inhloso yabo yokukhiqiza amaloli akwaHino asebenza umsebenzi ophakathi nendawo nosindayo anezinjini zeCummins ezidayiswa eNyakatho Melika ngasekupheleni kuka-2021. Kule nyanga, uHino uhambise eyokuqala yalezi zimoto ePenske Truck Leasing emcimbini isitshalo sabo eMineral Wells, WV njengesiqalo sokukhiqizwa kwemigwaqo inyuka.
“Sivule iminyango yendawo yethu entsha yokukhiqiza eMineral Wells eminyakeni embalwa eyedlule ukuxhasa ukukhuphuka kwesidingo nokulungiswa kwemikhiqizo. Namuhla, siyakwazi ukusebenzisa le ndlela yokukhiqiza yobuchwepheshe besimanje ukuze ibe nobuchule futhi ihlangabezane nezidingo zamakhasimende ethu. Kuyathokozisa ukubona owokuqala walolu hlelo uya ePenske Truck Leasing obesebenzisana isikhathi eside namaHino Trucks.
Amalungu amaHino Trucks kanye namaCummins abekhona ngesikhathi ethula uPaul Rosa, iSekela likaMongameli oPhethe we-Procurement and Fleet Planning wePenske Truck Leasing, nokhiye weloli lokuqala.
“Sinobudlelwano obudala noHino futhi bebengabahlinzeki abathembekile bamaloli asezingeni eliphakeme ngaphakathi kwamaloli ethu okuqashisa nokuqasha amaloli isikhathi esingaphezu kwamashumi amabili eminyaka. Silangazelela ukufaka lezi zimoto emikhunjini yethu futhi siyaqhubeka nokuthokozela ukwesekwa okuvelele okuhlinzekwa yiHino, ”kusho uRosa.
"Ukuhlanganiswa okusheshayo kwezinjini zeCummins B6.7 kanye ne-L9 ezinqoleni zeHino L & XL Series kungubufakazi bokuguquguquka nokubambisana phakathi kwamaqembu ethu," kusho u-Amy Boerger, iPhini likaMongameli weCummins kanye noMphathi Jikelele, eNorth America On Highway. "Sithanda ukuhalalisela amaloli akwaHino ekuqaleni komkhiqizo, kanye nePenske Truck Leasing ngokuthatha iHino L Series yokuqala enikwa amandla yiCummins."
Iloli elethwe liyi-22MY L Series, inenjini yakwaCummins B6.7 futhi iyingxenye yohlelo lukaHino lwamaloli ajwayelekile akwaClass 6 & 7 anedumela embonini ngokunikela ngezindleko eziphansi kakhulu zobunikazi esigabeni salo nokuphepha okusha izici. Amaloli akwaHino asanda kuklonyeliswa nge-Price Digests umklomelo wamanani agciniwe kakhulu emkhakheni wokuncintisana kakhulu we-Medium Duty Trucks nesigaba seConventional Cab & Chassis. IHino's L Series nayo inezinhlelo zonke zezinhlelo zokuphepha ezibandakanya i-Electronic Stability Control (ESC), iCollision Mitigation System (CMS) Lane Departure Warning (LDW), Active Cruise Control (ACC) kanye nebhande lomshayeli elibamba isihlalo ukuvikela amakhasimende amamayela ngemuva kwemayela.